Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde
Mubvunzo - Kugutsa Murume Pabonde
Kugutsa murume kunobva pakuhwisisa murume wako. Unokwanisa kugutsa umwe murume ugotadza zvachose kugutsa umwe murume asi uchingoita zvimwezvo.
Hwisisa zvinoda murume wako uye usajaira kuti munoisana makanyarara. Wana imwe SOUND younoita kana muchiisana.
Varume vanonyora vachikomburena chose kuti vakadzi havafakanyiki pakuiswa uye hava chemereri. Zvinhu zviviri zvinoita mukadzi ahi haanaki.
Zvibvise pazvinhu zviviri izvo. Sununguka kana une murume wako. Taridza kuti unoda chose kuvata naye uye shamwaridzana nechombo chake.